ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသောအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အပိုဒ် ၄၁ (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထ...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အပိုဒ် ၁၇ (က) အရ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျောက်ထားတင်ပြလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၂၅၇) ဦး နှင့် အဖွဲ့ အစည်း (၇၂) ဖွဲ့တ...
စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Coordinator) (၁) ဦးနှင့် လက်ထောက်စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Assistant) (၁) ဦး ခေါ်ယူခန့်ထားခြင်း
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံရေသုတေသနဌာန (Norwegian Institute for Water Research- NIVA) တို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် “ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း Phase II” တွင် စီမံကိန်းည...
TORs for PA for HWM Phase II (Myan) 10-12-19.zip
အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟို ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နောက်ဆက်တွဲ “က”တွင် အဆောက်အအုံတည်​ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ဖွံ့ဖ...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်ကို အများပြည်သူ သိရှိ စေနိုင်ရေး ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာသော “သစ်လွင်သောစိတ်ကူးကုမ္ပဏီ လီမိတက်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ချောင်းဒေသရှိ မြေဧရိယာ (၂၀) ဧကကျယ်ဝန်းသော (SGU-237 ) လုပ်ကွက်နှင့် ပြည့်သတ္တု တူးဖော...
Thit Lwin Thaw Seikku and Pyae.zip
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ သတ္တု...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ ကနဦးပ...
Green City Governance Consultant
Consultant will provide technical support to the Environmental Conservation Department and Global Green Growth Institute in the implementation of the GCF funded Green Cities Readiness Project. The objectives of the project are to develop Green Cities investment project pipelines and nominateaGC...
ToR for Green Cities Governance Consultant.pdf
Green City Services Consultant
The Consultant will provide technical support to the Environmental Conservation Department and Global Green Growth Institute in the implementation of the GCF funded Green Cities Readiness Project. The objectives of the project are to develop Green Cities investment project pipelines and...
ToR for Green Cities Services Consultant.pdf
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် အစီရင်ခံစာ ပြုစုရေးဆွဲရေးစီမံကိန်း (Second National Communication-SNC) Project အတွက် အမျိုးသားအကြံပေးပညာရှင်များခေါ်ယူခြင်း လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တိုးမြှင့်ခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် UN-Environment တို့ပူးပေါင်း၍ SNC စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောက်ဖော်ပြပါ အခန်း/ရလဒ်များအတွက် အမျိုးသားအကြံပေးပညာရှင်များ ခန့်အပ်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်...
Climate Scenario-MIMU.GHG Compiler-MIMU,National Circumstance_MIMU.zip